Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအားကစားသမားများ ရလဒ်များ မကောင်း	တနင်္ဂနွေနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၀၀ နာရီ ၂၃ မိနစ်	လင်းကိုကို	၂၀၁၂ ခုနှစ်၊လန်ဒန် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် မြန်မာ အားကစားသမားများသည် လက်ရှိအချိန်တွင် ...
ICC အမြန်ရောက်လိုသူ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဦးထူးထူးဟန်	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၅၈ မိနစ်	ကိုပေါက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံး ICC သို့ တက်ရောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မြန်မာစစ်ရာဇ၀တ်ကောင် အဖြစ် ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း ...
သေနတ် ကျည်ဆံရှိမှ၊ မီးသတ်ကား ရေပါမှ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၅ မိနစ်	ကျော်ခ	ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီးလောင်မှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေပြီး ဆုံးရှုံးမှုများလည်း ကြုံတွေ့နေသည်။ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်း ဇန်နဝါရီလ တလထဲတွင်ပင် နိုင်ငံအဝှန်း မီးလောင် ... ပုဂံလက်ဆော့	အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၀၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၃၉ မိနစ်	စန္ဒီမေ	တမာရနံ့၊ ထနောင်းပင် ရနံ့တို့က ဒါအညာပါလို့ ပြောနေသလို ဘေးဘီ ဝဲကြည့်လိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းတိုင်းကို ဂူ၊ ဘုရားပုထိုး၊ စေတီတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားပုံက ဒါ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ စုဝေးတဲ့ ပုဂံ ... ဒေလီ ကားတိုက်မှု၊ မြန်မာဒုက္ခသည် ၂ ဦး သေဆုံး	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၆ မိနစ်	သဲသဲ	ညဘက်အလုပ်မှ ပြန်လာသူ မြန်မာဒုက္ခသည် ၂ ဦး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသည့် ဖြစ်ရပ်တခု အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်အစောပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ ... ပိုမို ဖတ်ရှုလိုလျှင် ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 4	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved